China ROCK RIPPER ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Bonovo
Bonovo Rock Ripper nwere ike iwepu ihu igwe, tundra, ala siri ike, nkume dị nro na akwa oyi akwa. ọ na-eme igwu ala siri ike mfe ma na-arụpụta ihe. The Rock Ripper bụ ihe mgbakwunye zuru oke iji belata ebe ọ bụla siri ike, nke na-ezute na gburugburu ebe ọrụ gị.
A ga-emezi Bonovo Rock Ripper ka ọ gbajie ma mee ka ihe kachasị sie ike na-enye ohere iji rụọ ọrụ nke ọma n'okpuru ọnọdụ dị iche iche. Nke a ga - eme ka ị hụ na ihe gị adịghị mma kama ịkọ ya. Nke a pụtara na ị ga - eme ka ọ dị mfe, rips miri emi n’ebunyeghi nnukwu nsogbu na igwe.
Ngwaahịa .Dị Tonnes Ibu ibu Ntụtụ
Onye na-egwu ihe BR-60 1-10T 400-500kg 50-65mm
A na-emezi nnukwu ihe mkpuchi mmiri nke Bonovo iji dọọ ala oyi, paịlị, ma ọ bụ ala ọzọ siri ike nke gafere ọrụ ịwụ aro. Enwere ike iji mgbakwunye a dị ukwuu wepu stumps, mgbọrọgwụ, ma ọ bụ re-mmanya. Ridị isi otu Ripper dị mma maka ịbanye n'ime gburugburu ebe siri ike.
Ndị na-agba okwute nwere ike igbutu site na oke nkume, permafrost, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị tụbara na ya.
• Nkume dị elu
• Ala okwute
• Mwepụ aka na ukwu
Nke gara aga: Ogwe aka & ọganihu
Osote: ROTARY REKP BTARA BUCKET
backhoe aka na ukwu ripper
excavator ntu oyi ripper
excavator ripper eze maka ire ere
excavator mgbọrọgwụ ripper
ntu oyi ezé maka excavator
ntu oyi nchara maka mini excavator
ntu oyi eze ripper
hydraulic ripper maka excavator
mini excavator ripper mgbakwunye
mini excavator ripper maka ọrịre
mini excavator aka na ukwu ya
ripper ịwụ excavator
ripper ịwụ maka excavator
ripper shank maka excavator
ripper eze maka mini excavator
mgbọrọgwụ ripper maka mini excavator
Jikọọ NA-AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKWYKWỌ
TILT ngwa ngwa ọrụ